မိန်ကလေးများ လမ်းသွားရင် သတိထား.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိန်ကလေးများ လမ်းသွားရင် သတိထား..
မိန်ကလေးများ လမ်းသွားရင် သတိထား..
Posted by we R one on Jun 16, 2011 in Creative Writing | 18 comments
အခုတစ်လော မှမဟုတ် ၊ အရင် ကလည်း ရှိမှာပါ။ လမ်းသွားနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကို လိုက်နှောက်ယှတ် တာမျိုး ၊ ကားပေါ်မှာ လိုက်နှောက်ယှက်တာမျို။ နှောက်ယှက်တယ် ဆိုတာမျိုးက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ရည်းစားစကား လိုက်ပြောရင် ပြန်မကြိုက်နိုင်တဲ့ မိန်ကလေး အတွက်တော့ အနှောက်အယှက်ပဲ။
အခု ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကြုံ တွေ့ခဲ့တာ က တော်တော့ ကို စိတ်ပျက် ၊ ရွံ ရှာဖွယ်ကောင်တယ်။ကျွန်မ သူငယ်ချင်း က အင်းလျားလမ်း က Company တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မနက် ၈ နာရီခွဲ အရောက် ၀င်ရပါတယ်။ မနေ့က မနက်ပိုင်း 8 နာရီကျော်ကျော် လောက်မှာ သူ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ အတူ လှည်းတန်းက နေ သူ့ အလုပ်သို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း စကားတပြောပြောနဲ လမ်းလျှောက်လာပါတယ်။ သူတို့ နောက်ကနေ လူတစ်ယောက်စကား ပြောပြီးလိုက်လာတာ ကိုတော့2ယောက်စလုံးက သိတယ်။ သူလည်း သူ့လည်း သူသွား ကိုယ်လည်း ကိုယ့်လမ်း ကို သွားလို့ တွေးမိပါတယ်တဲ့။ သူပြောတဲ့ စကားသံ ကိုသေချာတော့ မကြားရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက် အဲဒီ လူက တဖြည်းဖြည်း နီးလာ ပြီ ပြောတဲ့စကားလုံးတွေ က လည်း ပိုပြီး ပီပြင်လာတယ် ။ အဲဒီ လူက မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ နားထောင်လို့မရတဲ့ မကြားဝံမနာ သာ စကားလုံးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ပြောရရင်တော့ ပါးစပ်နဲ အရသာခံ လိုက်စော်ကားတာပါပဲ။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်တင်မက ဘူး နောက်မိန်းကလေး လည်းတွေ လည်း တော်တော် များများ ကြုံတွေ့ရဖူးတယ်တဲ့။ တချို့ က နုတ်နဲ မဖွယ်မရာ ပြောတယ်။ တစ်ချို့ က ကိုယ်အမူအရာ နဲ မဖွယ်မရာ လုပ်ပြတယ်။တစ်ချို့လည်း ကားပေါ်မှာ။
တော်တော့ ကို စိတ်ပျက် ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေပါဘဲ။ နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာ ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးတွေက အများကြီးပါ မနေ့ကတောင် အဲလိုလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့ ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကို သူငယ်ချင်းက ပြောပြေနေသေးတယ် . သူတို့က ပါးစပ်နဲ့လဲ အရသာခံပြီးပြောတက်သလို အမူအရာနဲ့လဲ အရသာခံတက်ကြတယ် .
ပြော့မယ့်အစား ရွာထဲမှာ လျှောက်ရေးရင်
ကြုံရာနဲ့ လှည့်တီး လိုက်ပါလား။
လက်သံ ပြောင်မှန်း သိရင် မလုပ်ရဲတော့ဘူး။
ဟုတ်တယ်။ဒါရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ။ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့လည်း မျက်နှာကို ဖြတ်တီးလို့ရတယ်။ မေတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပွဲဈေးတွေသွားရင် ချိတ်ကြီးတစ်ချောင်းဆောင်သွားတယ်။ လက်သရမ်းလို့ကတော့ ချိတ်ကအပ်နဲ့ထိုးပစ်လိုက်တာပဲ။သူတို့လုံးဝမအော်ရဲဘူး သူတို့အပြစ်နဲ့သူတို့လေ။ ဒီကိစတွေကကြောက်စရာမလိုဘူး။ လူပြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။လူရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ လှည့်သာတီးထည့်လိုက်။
ဆူးရေ၊ မိန်းခလေးတွေဟာ ယောကျာင်္း လေးတွေကို အားချင်းယှဉ်လို့မနိုင်နိုင်ပါဘူး၊ တဖက်လူကတကယ်ကို မိုက်ရိုင်းရမ်းကားတဲ့သူတွေဖြစ်ရင် အငြိုးနဲ့ စောင့်ပြီးလုပ်ကြံမှာစိုးရတယ်၊ အားရှိတဲ့သူကိုယှဉ်ပြိုင်ရင် ဥာဏ်ကိုသုံးရတယ်။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ မသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာကိုတော့ မှတ်မိအောင်ကြည့်ထားပြီးတွေ့ရင်ရှောင်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်။
HP , MP3 တခုခုနဲ့ အသံသွင်းဖို့ ကြိုတင်လုပ်လာပါ။
အဲဒီလူကို လက်ညှိုးထိုးပြီး …နေ့စဉ်လိုက်နှောင့်ယှက်နေကြောင်းပြောပြပါ။
မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးတွေ အရာရာကို ရင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းပြလိုက်ပါ
သူတို့ကြောင့် နာရည်းစားမရရင်တော့ …..
ဥပမာ ထောင်ဒါဏ် ၅ နှစ်
မိန်းကလေးတော်တော်များများ အဲ့လိုအဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးကြပါတယ်..။
တကယ်တမ်း တိုင်ဖို့ကြတော့ သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကို ကိုယ့်နှုတ်က ပြန်ပြောဖို့မ၀ံ့တာရယ် အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာ လူကထူပူပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး သူတို့ကကျူးလွန်နေကြတာပါ..။
antimoe ပြောသလို အသံသွင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ သက်သေကလည်းရှိတော့ သူတို့လည်းငြင်းလို့မရတော့ဘူးလေ ..။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဒီပိုစ်မှာ ကွန်မန်းတွေကို အနုတ်လိုက်ပေးနေတဲ့ လူက မိန်းမတွေကို လိုက်နှောက်ယှက်တာကို ၀ါသနာ ထုံတဲ့ လူတွေ နဲ့တူတယ်။
တုန့်ပြန်ချက်တွေ ဆွေးနွေးချက်ကို ကြားတော့ အသည်းခိုက်အောင် နာတယ် ထင်ပါရဲ့..
ကဲ ကိုယ့် အကြောင်း ကိုမလုံရင်တော့ နောက်ထပ် တခါ အနုတ် ပေးလို့ရတယ်။
i made it + .so – it already delete
ရဲစခန်းကိုကြိုပြီးတိုင်ထားလို့မရဘူးလား။ ဒီအချိန် ဒီနေရာမှာ လိုက်နှောက်ယှက်နေပါတယ်ဆိုပြီး ရဲစခန်းမှာတိုင်ထားပြီးစောင့် ဖမ်းရင်ရောမကောင်းဘူးလား။ အသံသွင်းတာလည်း ကောင်းတာပဲ။
အဲ့ဒီလို အပြောခံရတဲ့အခါ မိန်းကလေးအတော်များများက တခြားလူကို ပြန်ပြောရမှာ အကူညီတောင်းရမှာ ရှက်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ထိရောက်တဲ့ တုံ့ပြန်မှူမျိုး လုပ်တာ မတွေ့ရဘူး … ။ ခဏတာကြောင်သွားမိတာပါ … တခါမှလည်း မကြားဖူးပဲကိုး ။
etone ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်… ။ လျှပ်တပြတ်သူဘာပြောလိုက်ပါလိမ့်…. တွေးနေတဲ့အချိန် လေးငါး စက္ကန့်…. သတိဝင်လာပြီး ဖိနပ်နဲ့ ချွတ်ပေါက်မိလိုက်တယ်… ။ မရှောင်ရင် လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ တွတ်ပီရဲ့ ပစ်ချက်လိုပဲ မထိလိုက်ဘူး …။ ငနဲက မြန်မှမြန် လမ်းချိုးထဲ လစ်သွားရော… ။ ဘေးကလူတွေကတော့ ဒီကောင်မလေး ရိုင်းလိုက်တာ ဖိနပ်နဲ့တောင် ပစ်တယ် ထင်ကြမှာပဲ … ထင်ချင်တာထင်ပေါ့ ဂရုမစိုက်ဘူး … ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖိနပ်လိုက်ကောက် ၊ပြန်စီးပြီး လိုရာခရီးဆက်သွားတော့တယ်… ။ အဲ့ဒါက တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ပြီး ၊ ကျောင်းတတ်တုန်းက အဖြစ်ပျက်ပါ … အခုတော့ ဒါမျိုးတွေ မကြုံရတော့ပါဘူး ။